UMgqithi akayizwa eyabangaphandle ekuqeqesheni iBafana - Impempe
UMgqithi akayizwa eyabangaphandle ekuqeqesheni iBafana
Ukhala ngokuthi sekukaningi kulandwa abaqeqeshi bangaphandle kwiBafana Bafana kodwa bangasizi ngalutho uManqoba Mngqithi weMamelodi Sundowns. Uthi laba baqeqeshi bafike benze abakwenzayo, behluleke bese beyahamba kungekho okuzuzwe yiqembu lesizwe ngabo.
“Ngicabanga ukuthi sesibe nabaqeqeshi abaningi bokufika kuleli abangazange baphumelele eqenjini lesizwe. Ngikholwa wukuthi asikwazi abaqeqeshi bakuleli abangakuzuza. Sibathatha kancane bese kuthi noma sebenikiwe ithuba bangakutholi ukwesekwa okufanele, okunikwa abokuhamba.
“Sihlala sibabuka njengezehluleki kanti lokho mhlawumbe kungenxa yokuthi asibeseki ngokugcwele,” kusho uMgqithi.
ISAFA ikuqinisekise kuleli viki ukuthi nguHugo Broos waseBelgium osezoba ngumqeqeshi weBafana kulandela ukuxosha kwayo uMolefi Ntseki. UMgqithi akawuboni umehluko ozofika noBroos, kodwa wabe esenxenxa ukuthi kunikwe abaqeqeshi bakuleli ithuba lokusebenza naye ukuze bafunde uma kukhona okuhlukile anakho.
“Kubalulekile ukuthi abantu abanjalo besebenzisane nabantu ababaziyo laba badlali, okumele kube ngabaqeqeshi bakuleli. Ukuthi umqeqeshi wokufika abe nesekela lakuleli elisebenza ngokugcwele kungasiza.
“Kwamsiza uPitso Mosimane ukusebenza noCarlos Alberto Parreira futhi ngikholwa wukuthi onganikwa ithuba lokusebenzisana nalo oqokiwe manje kungamsiza naye,” kuchaza uMngqithi.
Uthe kumele kubhekwe nokuthi uma kulethwa umqeqeshi wangaphandle, assize nasekuthuthukiseni abakuleli ngoba kusuke kubhekwe ukuthi unolwazi olungcono olungekho kuleli.
“Mina ngiyohlezi ngeseka umbono wokuthi abaqeqeshi bakuleli bengawenza umsebenzi bebodwa. Lokhu ngikusho ngoba uma ungambuza (uBroos) ukuthi ngobani abadlali abayinsika kwiSundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs noma kwiSuperSport United, kungenzeka angazi noyedwa.
“Futhi kuzomthatha isikhathi ukujwayela kuleli nokuqonda kahle bonke abadlali bakuleli – labo abadlala ekhaya nabakwamanye amazwe,” kucacisa uMngqithi.
Previous Previous post: Kubi kuMosimane eGibhithe, angase achithwe
Next Next post: Usephoqeleke ukuliyeka ibhola unozinti owaxhopheka ejimini